Hargeysa: Qoysas Danyar ah oo Loo Qeybiyay Lacago ay Ganacsiyo yar yar ku abuurayaan | Salaan Media
Hargeysa: Qoysas Danyar ah oo Loo Qeybiyay Lacago ay Ganacsiyo yar yar ku abuurayaan
Hargeysa (SM)-Wasiirka Wasaarada shaqada iyo Arrimaha bulshada Maxamuud Axmed Barre (Garaad) ayaa ka qayb galay munaasibada boqol qoys oo dan yar ah lagu gudoon siinayay midkiiba lacag dhan afar boqol oo dollar oo shaqo abuur loogu samaynayo.
100-kaas qoys ayaa iskugu jiray 32 qoys oo degan xaafadda Daami, 58 qoys oo degan xaafadda State House-ka iyo 10 qoys oo la nool xanuunka HIV/AIDS.
Lacagtan oo ay bixisay Ha’yadda SCF, ayaa ahayd mid loogu tallo galay in ay qoysaskaasi kor ugu soo qaadaan heerka dhaqaale ee qoysaskooda iyagoo ku abuuraya ganacsiyo yar yar oo ay nolashooda ku maareeyaan.
Munaasibaddii lagu gudoon siinayay lacagtaasi ayaa Isniintii lagu qabtay xarunta wasaaradda shaqadda iyo Arrimaha bulshadda ee Magaaladda Hargeysa. Waxaana ka soo qeyb galay Wasiirka Wasaaradda shaqadda iyo arrimaha bulshadda, Saraakiil sar-sare oo ka socday Ha’yadda SCF, masuuliyiin ka socday laba urur oo maxali ah oo soo xulay qoysaskan oo la kala yidhaahdo USWO iyo SOYDA, Xildhibaan ka socday Guddi hoosaadka arrimaha bulshadda ee Golaha Guurtidda iyo Agaasimaha xidhiidhka dadweynaha ee Madaxtooyadda Somaliland.
Wasiirka Wasaaradda shaqada iyo Arrimaha bulshadda oo munaasibadaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in wasaarad ahaan ay u mahad celinayaan Hay’addan SCF deeqda lacaegeed gudoonsiisay dadka danyarta ah, isagoo arrintaa ka hadlaayayna waxa uu yidhi “Wasaaradda ayaa waxyaabaha shaqadayadda ah waxa ka mida in cidii caawisa dadka danyarta ah ay u mahad celiso ILAAHAY baa mahadda lehe’. Xukumadan maanta jirtaa waxay mas’uul ka tahay oo ay balan qaaday in wixii loo qabanayo bulshadda danyarta ah iyaduna wax ku darsato wixii loo qabanaayo.”
Wasiir Garaad waxa uu si weyn ugu mahad celiyay Ha’yadda SCF ee qoysaskan lacagta siisay.
“Haddii maanta aynu haysano ictiraaf lacagtaa waxa idin siin lahaa lacagtaa gacan qabadka ah baananka, lacag intan ka badan baad heli lahaydeen. Laakiin ictiraaf la’aanta ayaa keenaysa in Hay’addaha lala kaashado. Markaa waa in aad ku fikirtaan in aad lacagtaas yar ee laydin siiyay aad dhaqaale qoysaskiina ugu abuurtaan.”ayuu yidhi Wasiirka Shaqadda iyo Arrimaha bulshadda, waxaanu intaas ku daray “Haddii aad dib u raacdaan taariikhda gacansatadeena waawayn qaar baa khudradda iibin jiray, qaar baa bagaashle yar ahaa. Qofku marka uu isagu is dhiso ee uu dhaqaalihiisa yar uu is yidhaa kor u soo qaad ee uu daacad ka yahay ALLE wuu ku guuleeyaa.”
Wasiirku Ku Xigeenka Shaqadda iyo Arrimaha bulshadda Marwo Shugri Xariir Ismaaciil oo xafladaasi ka hadashay ayaa ku dar-daartay qoysaska lacagtan la siiyay inay ka fikiraan inay wax ku soo saaraan oo ay ganacsiyo yar yar ku sameeyaan. Marwo Shugri waxay intaas ku dartay in mashruucani u najaxi doono hadba sida ay 100-kan qoys uga faa’iidaystaan.
“Maanta boqol qoys ayaa laga kaabayaa xagga dhaqaalaha, markaa hadda waxa laydin tusayaa in la idin kaabo oo la idin tuso halkii loo mari lahaa nolosha, idinkana waxa loo baahan yahay in aad jidkaas cagta saartaan oo aad dhaqaalihiina kor u soo qaadaan.Waxa la doonayaa in aanu mashruucani baabi’in boqolkiinan qoysna waa in aad noqotaan qaar ka faa’iidaysta, si qoysas kalena mashruucan looga faa’iideeyo,”ayay tidhi Wasiir Ku xigeenku.
Marwo Shugri Xariir waxay qoysaskan kula dardaarantay in iska wacyigeliyaan HIV/AIDS-ka, waxaanay ugu baaqday inaan la takoorin dadka la nool xanuunkaasi.
Sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay ku simaha Madaxa Ha’yadda SCF ee Somaliland oo sheegtay inay ku faraxsan tahay in barnaamijkani guulaysto, waxaanay qoysaskan u soo jeedisay inay si wanaagsan u maamushaan isla markaana ay ku bilaabaan ganacsiyo yar-yar oo ay quutal-daruurigooda kala soo baxaan.
Nimco waxay u mahad celisay Wasaaradda shaqadda iyo arrimaha bulshadda oo ay sheegtay inuu ka dhaxeeyo xidhiidh wada shaqayneed oo adagi isla markaana ay sii wadi doonaan barnaamijyadda lagu gacan qabanayo bulshadda danyarta ah.
Sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay qoysaska lacagtaas la gudoon siiyay oo Wasaaradda shaqadda iyo Ha’yadda SCF uga mahad celiyay lacagtan oo ay sheegeen inay wax u tarayso si ay u furaan meherado iyo ganacsiyo yar yar oo ay ku noolaadaan.
Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Agaasimaha xidhiidhka dadweynaha ee Madaxtooyadda C/Risaaq Ismaaciil Maxamed (Kildhi), Xildhibaan Siciid Maxamed Cismaan oo ka socday Guddi hoosaadka arrimaha bulshadda ee Golaha Guurtidda iyo masuuliyiin ka socday ururadda USWO iyo SOYDA, waxaanay dhammaantoodba wasaaradda iyo Ha’yadda SCF ku bogaadiyeen tallaabadan ay qaadeen ee ay ku saacidayaan qoysas danyar ah oo degan caasimadda Hargeysa.